Musikana Akaremara Okohwa Pakuru kuHwedza
Kurume 26, 2010
Mumwe musikana akaremara wekuHwedza ari kuita zvinoshura mare pakuita mabasa ekuzvibatsira achizadzisa zvaanoti chido chababa vake, avo vakashaya makore matatu apfuura.
Muzvare Praxedes Chadumba vakaberekwa zvakanaka, vakakura vachizviitira zvinhu zvavo. Asi pavakasvika makore gumi nematatu, Muzvare Chadumba vakaita rombo rakaipa - poriyo yakavashanyira, ndokuvasiya makumbo ose aremara. Izvi zvakarwadza baba vavo, VaRichard Chadumbura, avo vaigara mumusha wekwaMadoka kuHwedza.
Neshungu, baba ava vakaita chitsidzo chekushandira mwanasikana wavo, senzira yekutambira zvavakanga vapihwa nanyadenga.
Baba Chadambura vakakura pamusha pavo, ndokugadzira ruwanze nematombo, kuitira kuti mwana wavo asanetseke kufamba nemadondoro. Vakavakawo chimbuzi nenzira inoita kuti mwanasikana wavo apindemo nemadondoro ake.
Vaona kuti mwana wavo haachakwanisi kuenda kutsime sevamwe vasikana, Baba Chadambura vakachera mugero wakareba makiromita maviri nechidimbu, kubva kuDendenyore kunobuda mvura yechibhorani. Vakapihwa rubatsiro rwemapombi nemumwe muzvinabhizimusi ndokukweva mvura kusvika pamba pavo.
Chishuvo chavo chakanga chiri chekuti vakwanise kudiridzira minda yese yepamusha pavo.
Mudzimai wavo, Janet, vanoti VaChadambura vangadai vakatiza mhuri yavo, asi matambudziko avaisangana navo, aitoita kuti vatonyanye kushinga. Vachangopedza kushanda hurongwa hwekudonza mvura, Baba Chadambura vakabva vashaya mugore ra 2007 mushure mekupihwa zvekudya zvakanga zvine muchetura.
Muzvare Praxedes Chadambura vakachema vakazvinyaradza, chiedza chichibva chauya kwavari.
Pakupihwa kwakaitwa vemunzvimbo iyi mbeu nefotereza nehurumende gore rapera, ivo vakaforerawo ndokuwana zvinokwana eka imwe chete yemunda. Vakatsvaga vanhu vakavabatsira kudyara nenzira ye timba ugute, pasina kurimwa.
Hapano chibage chabuda, dambudziko rakauya rekusakura. Muzvare Chadambura vakakanda madondoro avo pasi, ndokupfugama mumunda, votanga kusakura.
Izvi zvakashamisa amai wavo, vamwe vemuraini vachikekedza kuseka. Asi Muzvare Chadambura havana kumira kusvika vapedza munda wese.
Amai Viola Machekanyanga, avo vane makore makumi matatu nemanomwe, mugari wemumusha wekwaMadoka. Amai Machekanyanga vanoti zvavakaona zvakaratidza kuti mwari anobatsira anozvibatsirawo, nekuti munda wavo uri kuyevedza semare kutokunda minda yevakawanda vanozvifambira.
Sabhuku vemunharaunda iyi, Sekuru Lameck Chigundu, avo vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa, vanotiwo Muzvare Chadambura vanyatsoratidza simba riri mukati memwanasikana akaremara
Muzvare Chadambura vanoti vakakohwa chibage chavo, vanotarisira kuti vatenge hosipaipi yekuti vazodiridzira munda wavo munguva yechando nematsutso.
Shungu dzakadai dzikaramba dziri muvanhu vakaremara saMuzvare Chadambura, zvichaita kuti tarisiro yavo mune remangwana, inge yakajeka, kwete kumirira zvekubatsirwa muzvinhu zvose zvavanoita muhupenyu.